Izigaba - Ukuhlukanisa uhlu lwakho lokumaketha nge-imeyili nokukhomba okuqukethwe kuqhuba imiphumela emangalisayo kepha kuvame ukunganakwa ngenxa yobunzima obubandakanyekayo. Kuwufanele umzamo futhi amapulatifomu amaningi wokumaketha e-imeyili ayayeseka.
Ukwenza okuthandwa nguwe - Dlulela ngale kokuthi [Faka Igama Lokuqala] bese unikela ngemininingwane emkhankasweni wakho we-imeyili eqondene ngqo nemininingwane yomthengi wakho nomlando wakho wokuthenga. Abathumeli be-imeyili babone ukwanda kwemali engama-92% kanye nokuphindwe kabili kwesilinganiso sokuguqulwa lapho ama-imeyili enziwe aba ngewakho uqobo.
Izinkinobho nezingcingo ezenzelwa - Uma uthwebule i-imeyili yakho njengekhasi lokufika, ingabe kukhona ukubizelwa esenzweni ukushayela lowo obhalisile esinyathelweni esilandelayo sokuzibandakanya nomkhiqizo wakho? Uma kungenjalo, ulahlekelwa yithuba elikhulu lokuthuthukisa i-imeyili yakho.
Izithombe - Amabhokisi wokungenayo amatasa, ngakho-ke ukulindela umuntu obhalisile ukuthi afunde wonke amagama aqoshwe ngokucophelela owafakile ku-imeyili yakho kungenzeka ukuthi angenzeki. Khulisa ukuzibandakanya nokuchofoza ngokunikeza isithombe esiphoqayo ukuheha obhalisile ukuthi afunde futhi achofoze. Faka ama-GIFs e-animated ukuze ungeze ubuhle obuthile!